Chinangwa chezvirevo (1-7)
Zvakaipira shamwari dzakaipa (8-19)
Uchenjeri hwechokwadi hunoshevedzera kuvanhu vese (20-33)
1 Zvirevo zvaSoromoni,+ mwanakomana waDhavhidhi,+ mambo weIsraeri:+ 2 Zvekudzidza* uchenjeri+ uye kurayirwa;Zvekunzwisisa mashoko euchenjeri; 3 Zvinorayira munhu kuti awane njere,+Kururama,+ akwanise kunzwisisa nyaya,+ uye ave akatendeka; 4 Kuti zvipe ungwaru+ kune vasina ruzivo;Zviite kuti jaya rive neruzivo uye rikwanise kunyatsofunga.+ 5 Munhu akachenjera anoteerera uye anoramba achidzidza;+Munhu anonzwisisa anowana mazano euchenjeri+ 6 Kuti anzwisise zvirevo nemadimikira,*Mashoko evakachenjera nezvirahwe zvavo.+ 7 Kutya Jehovha ndiko kutanga kweruzivo.+ Mapenzi chete ndiwo anozvidza uchenjeri uye kurayirwa.*+ 8 Mwanakomana wangu, teerera kurayira kwababa vako,+Uye usaramba kudzidzisa kwaamai* vako.+ 9 Iko kwakaita sekorona inoyevedza iri mumusoro wako+Uye chishongo chakanaka chemuhuro mako.+ 10 Mwanakomana wangu, kana vatadzi vakaedza kukufurira, usabvuma.+ 11 Kana vakati: “Handei tese. Ngatihwandirei kuti tideure ropa. Tichahwanda takamirira vanhu vasina mhosva. 12 Tichavamedza vari vapenyu sezvinoita Guva,*Vari zvavari, sevaya vanodzika kugomba. 13 Ngatitorei pfuma yavo yese inokosha;Tichazadza dzimba dzedu nezvatinenge tapamba. 14 Unofanira kubatana nesu,*Togovana tese zvakaenzana zvinhu zvatinenge taba.”* 15 Mwanakomana wangu, usavatevera. Usaita kuti tsoka dzako dzipinde munzira yavo,+ 16 Nekuti tsoka dzavo dzinomhanyira kunoita zvakaipa;Dzinomhanyira kunodeura ropa.+ 17 Zvechokwadi kupedza nguva kuteya mambure shiri dzichiona. 18 Ndokusaka ava vachihwandira kuti vadeure ropa;Vanohwanda kuti vapfuudze upenyu hwevamwe.* 19 Idzi ndidzo nzira dzevaya vanotsvaga pfuma yekubiridzira,Iyo inourayisa vaya vanoiwana.+ 20 Uchenjeri hwechokwadi+ hunoshevedzera huri mumugwagwa.+ Hunoramba huchikwidza inzwi huri mumisika.+ 21 Hunoshevedzera huri pakona pemigwagwa yakazara vanhu. Hunotaura huri pamagedhi eguta huchiti:+ 22 “Kusvikira riini imi vasina ruzivo muchiramba ruzivo? Kusvikira riini imi vaseki muchingofadzwa nekuseka? Uye kusvikira riini imi mapenzi muchingovenga ruzivo?+ 23 Teererai* pandinokutsiurai.+ Ndichabva ndakudururirai mweya wangu;Ndichaita kuti muzive mashoko angu.+ 24 Nekuti ndaishevedzera asi maingoramba,Ndaitambanudza ruoko rwangu asi hapana aizviona,+ 25 Makaramba muchisiya mazano angu eseUye muchiramba kutsiurwa neni, 26 Ini ndichasekawo pamuchawirwa nenjodzi;Ndichakunyombai pachasvika zvamunotya,+ 27 Pachasvika zvamunotya sekusvika kunoita dutu,Uye njodzi yenyu paichasvika sechamupupuri,Pamunosvikirwa nenhamo nematambudziko. 28 Panguva iyoyo vacharamba vachindishevedza, asi handizopinduri;Vachanditsvaga nemaziso matsvuku, asi havazondiwani,+ 29 Nekuti vakavenga ruzivo,+Uye havana kusarudza kutya Jehovha.+ 30 Vakaramba zano rangu;Havana kundiremekedza pese pandaivatsiura. 31 Saka vachawana zvinokodzerana nenzira yavo,*+Uye vachazvimbirwa nemazano avo.* 32 Nekuti kutsauka kwevasina ruzivo kuchavauraya,Uye kushayiwa hanya kwemapenzi kuchaaparadza. 33 Asi munhu anonditeerera achagara akachengeteka+Uye haazonetseki achitya dambudziko.”+
^ ChiHeb., “Zvekuziva.”
^ Kana kuti “nemifananidzo.”
^ Kana kuti “Kanda mujenya wako pamwe chete nesu.”
^ Kana kuti “Toisa zvinhu zvedu muhomwe imwe chete.”
^ Kana kuti “mweya yevamwe.”
^ Kana kuti “Tendeukai.”
^ ChiHeb., “vachadya zvibereko zvenzira yavo.”
^ Kana kuti “nezvirongwa zvavo.”